यो वर्ष लोकसेवाले कर्मचारी नमाग्ने, हेर्नुस् कुन कुन समूहलाई पर्छ असर - Dainikee News::Fastest news portal nepal, news from nepal
सोमवार, मंसिर ३, २०७५ |
यो वर्ष लोकसेवाले कर्मचारी नमाग्ने, हेर्नुस् कुन कुन समूहलाई पर्छ असर
काठमाडौं, असोज २८ । यो वर्षको असोज महिनामा लोकसेवा आयोगले कर्मचारी नमाग्ने भएको छ । सधैँ असोजको अन्तिम बुधबार विभिन्न पदमा दरबन्दी पुर्तीका लागि विज्ञपन प्रकाशन गर्ने गरेको भएपनि यो वर्ष कर्मचारी नमाग्ने भएको हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया नै अगाडि नबढेकोले रिक्त दरबन्दी उकिन नभएकोले कर्मचारी नमाग्ने आयोगले जनाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगलाई अहिलेसम्म रिक्त दरबन्दीको विवरण नदिएका कारण उसको नियमित विज्ञापनमा असर परेको हो ।
अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुन सकेको छैन । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा गरी अझै कति कर्मचारी आवश्यक छ भन्ने तथ्यांक नभएका कारण विज्ञापनमा अन्योल भएकाले यसवर्षको विज्ञापन सूचना प्रकाशित नगर्ने लोक सेवा आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
संघीय मन्त्रालयले स्थानीय तहमा दुई महिनाभित्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी समायोजन ऐनलाई संसोधन गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारी छ । अध्यादेश आएलगत्तै रिक्त दरबन्दीको अध्ययन गरेर कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापन गर्ने योजना आयोगले जनाएको छ ।
कर्मचारी माग गर्ने विज्ञापन रोकिदा विशेष गरी प्रशासन, प्राविधिक, शिक्षा र स्वास्थ्य समूहलाई प्रभाव पर्नेछ । तर, परराष्ट्र, लेखा, संसद र न्याय सेवा समूहको विज्ञापन भने नियमित कार्यतालिका अनुसार नै आयोगले विज्ञापन गर्न सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: आइतवार, अशोज २८, २०७५ /Sunday, October 14th, 2018, 8:41 am
सरकारले नागरिकता वितरणमा कडाइ गर्ने
ललितपुरका सडकमा पनि सिसी क्यामेरा जडान हुँदै
नेविसंघको म्याद तीन महिनालाई थपियो
श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरीको प्रवक्ता
सामुदायिक लघुवित्तको आईपीओ आइतवारदेखि निष्कासन, प्रति व्यक्ति कति कित्तासम्म भर्न पाउने र कहाँबाट आवेदन दिने ?
मध्य भोटेकोशीको साधारण शेयर कात्तिक २८ गतेदेखि बिक्री खुला, कसले आवेदन दिन पाउने ?
सांसद सिलवाललाई कार्यकर्ताले नै देखाए कालो झण्डा
भोलीदेखि मध्य भोटेकोशीको साधारण शेयर खुल्दै
आजदेखि खुल्यो भोटेकोसीको सेयर, कसले आवेदन दिन पाउने ?
सामुदायिक लघुवित्तको आईपीओ आजदेखि निष्कासन, प्रति व्यक्ति कति कित्तासम्म भर्न पाउने र कहाँबाट आवेदन दिने ?
शिक्षा मन्त्रालयले खटायो स्थानीय तहमा शिक्षाका शाखा अधिकृत (सूचिसहित)